Maromaro ireo pretra sy ny pasitera lavon’ny Covid-19: mety hikatona indray ny fiangonana | NewsMada
Par Taratra sur 17/04/2021
Fiaraha-miatrika ny ady amin’ny valanaretina. Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Mahazoarivo omaly, ny eo anivon’ny FFKM. Tombanana fa mety hirona any amin’ny hampiatoana ny fotoam-pivavahana ny fanjakana.
Tsy afaka ny hangina intsony ny eo anivon’ny FFKM manoloana ny fihanaky ny valanaretina. Tafiditra ao anatin’izany ny fahafatesan’ireo mpitondra fivavahana maromaro noho ny Covid-19: pretra sy pasitera… Tsy niandry ela fa tonga amin’ny fihaonana teo amin’ny praiminisitra sy ireo filoham-piangonana ny raharaha. Nitarika izany, omaly, ny filoha am-perinasa, ny Mgr Razanakolona Odon.
Nanambara izy efatra mi­rahalahy mianaka filoham-piangonana fa niainga avy amin’ny fampiantsoan’ny fitondram-panjakana ho amin’ny fifanakalozana sy ny fakan-kevitra momba ireo fepetra horaisin’ny mpitondra manoloana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ny votoatin’ny fihaonana. “Tafi­ditra anatin’izany ny ho fiarovana ny vahoaka malagasy. Fotoana koa io fihaonana io nahafahan’ny andaniny sy ankilany nifampidinika sy nifampizara ny amin’ny toe-java-misy, indrindra ny nitondranay ny hetaheta avy eny anivon’ireo fiangonana”, hoy izy ireo.
Andrasana ny lahatenin’ny filoham-pirenena
Nanterin’ny FFKM fa zava-dehibe izao fihaonana izao satria misy fiantraikany eo amin’ny fiainam-piangonana ny tranga eto amin’ny firenena. “Mampiseho taratra ny fahatokisana sy ny fanomezam-boninahitra ny FFKM izao fihetsiky ny fi­tondrana izao”, hoy ihany ny Mgr Razanakolona Odon.
Tsiahivina fa mialoha ny ho lahatenin’ny filoham-pirenena, tokony ho anio izao fihaonana teo amin’ny roa tonta izao. Araka izany, andrasana ny mety hamba­ran’ny filoham-pirenena, momba ny fiangonana sy ny fanompoam-pivavahana.